फेरि बढ्यो पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य, के मा कति ? - Sagarmatha TV
फेरि बढ्यो पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य, के मा कति ?
काठमाडौं, ३ जेठ । नेपाल आयल निगमले बुधबार राति १२ बजेदेखि नै लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ ।
१५ दिन अघि मात्रै मूल्य बढाएको निगमले अहिले फेरि पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य समान प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाएको हो । बुधबार राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको निगमका प्रबक्ता विरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो ।
मूल्य बढेसँगै अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १० तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ९२ रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि सोही अनुसार समायोजना गरिएको गोइतले बताउनुभयो । एलपिजि ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत छ ।